China Semi okuzenzakalelayo imaski Machine Kn95 imaski Machine Ezomnotho imaski ukusika umshini ifektri abakhiqizi | I-Haojing
Semi okuzenzakalelayo imaski Machine Kn95 imaski Machine Okwenziwayo imaskhi ukusika umshini
Umshini wefilimu onejubane usebenzisa ubuchwepheshe be-welding be-ultrasonic ukukhiqiza ngokuzenzakalela izingqimba ezi-2-5 zomzimba wemaski kavemvane .Qedela umsebenzi ngokuzenzakalela, ukuphakelwa ngesandla kanye nokudla okuzenzakalelayo; izinqubo ezifakiwe zifaka ukondla kwamakhoyili, ukondla ibhali lamakhala, iwelding pattern mask, ukusika imaski, nokusika umzimba okuyinhloko.
Le mishini ikhiqiza umzimba omkhulu wesifihla-ntethe se-butterfly ngokubambisana kohlelo lokuphakela, uhlelo lokwakha indwangu, kanye nohlelo lwekhala lwekhala ekwakheni nokusika.
Lesi sisiki esincane yidivayisi eyenziwe yithi ukunciphisa izindleko zokuhamba. Uma kuqhathaniswa nezisiki ezijwayelekile, incane ngosayizi futhi ithatha indawo encane, enganciphisa ngempumelelo izindleko zokuhamba zamakhasimende.
Yize ubukhulu bemishini buba buncane, ukusebenza kwayo nejubane akukuncane. Sibeka imaskhi yokuphrinta nokusika ummese kwisikhunta ukunciphisa ivolumu yemishini. Isisiki semask singakhiqiza amaski angama-30 ngomzuzu.
Isisiki sinomshini wokuqoqa imfucuza. Ngesikhathi senqubo yokukhiqiza imaski, kuzoba khona udoti wendwangu. Lezi zindwangu zingaqoqwa ngedivayisi yethu ngaphandle kokuqoqwa mathupha, kunciphise izindleko zabasebenzi.
Izingxenye zemishini zisebenzisa izinhlobo ezaziwayo, njengeSchneider, i-Nokia ne-AirTAC njalonjalo. Futhi singashintsha izingxenye zemikhiqizo ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
I-ultrasound yemishini isebenzisa imikhiqizo eyaziwayo yasekhaya, engeke iqinisekise kuphela impilo yenkonzo ye-ultrasound, kepha futhi yenze nomphumela wokuvala umphetho wesifihla-buso ube muhle.
I-1.Ultrasonic welding technology yamukelwa ukwenza imikhiqizo eqediwe ibe yinhle, ihlanzeke futhi ibenemvelo.
I-2.Umugqa wonke wokukhiqiza uzenzakalelayo, usebenza kahle futhi usindisa abasebenzi kusuka ekudleni, ukufakwa komugqa wempumulo, ukubeka uphawu emaphethelweni nokusika.
Isakhiwo sefreyimu senziwe nge-aluminium alloy, wonke umugqa uqinile, kulula ukuwuhlanza, muhle njalonjalo.
4.Computer PLC izinhlelo zokulawula, i-servo drive, izinga eliphakeme lokuzenzekelayo. Ukuzinza okuphezulu nokwehluleka okuphansi.
5.Automatic ukulawulwa kokungezwani kwezinto zokusetshenziswa ukuqinisekisa ibhalansi yokungezwani kwezinto zokusetshenziswa.
6.Umshini uhlangene, usayizi omncane futhi awuthathi isikhala.
Izingcezu ezingama-30-50 / iminithi
Izinga lokwehluleka kwemishini
Ingcindezi yomoya isiyonke
Indwangu engalukiwe (Isendlalelo esiseduze nobuso）
Indwangu engalukiwe (ungqimba lwangaphandle Out
Ncibilikisa ungqimba wendwangu ophephukile
umoya oshisayo non-woven indwangu ungqimba
Ukucaciswa kwebha yekhala
Isigaxa se-mask, esisetshenziselwa ikakhulukazi ukuphrinta nokusika buso
Indlela yebhuloho yekhala
Isetshenziselwa ukubeka ibhuloho lasekhaleni
Ikakhulu kusetshenziselwa ukuqala nokumisa imishini
Langaphambilini onqenqemeni ikhanda ibhande imaskhi Welding umshini abakhiqizi Isiteshi esisodwa nehele onqenqemeni banding umshini
Olandelayo: china n95 imaski yokwenza umshini Ubuso Imaski Machine imaskhi ukusika umshini
China n95 imaski ukwenza umshini Face imaski Machine ...